सङ्घीय ‘करतान्त्रिक’ नेपाल – BRTNepal
सङ्घीय ‘करतान्त्रिक’ नेपाल
पेशल आचार्य २०७५ भदौ १७ गते ९:०२ मा प्रकाशित
देशले बिस्तारै काँचुली फेर्नेछ भन् ठानेर नेपाली जनताले चुनावताकाको नेकपा गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने सुविधाजनक जनादेश दिए । अघिल्ला सरकारहरू निरन्तर अस्थिर थिए । ९ महिना र वर्ष दिन पनि नटिक्ने अवस्थामा । आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो तर सरकारमा हुनु पर्ने जति जोस र जाँगर सामान्य जनताले देखिरहेका छैनन् । सरकार कुरामा मात्र अल्झिएको देखिएको छ । आखिर किन ?
नेपालको अवस्था हालसालै मात्र खराब भएको होइन । अस्थिरताका धेरै कारकहरू देशैभरि विद्यमान पहिले थिए र अहिले पनि छन् । हामीले शासक मात्र फेर्ने कोसिस ग¥यौं तर संस्कार फेरेनौँ । विगतको पञ्चायती शासन व्यवस्थाले विकास गरेन भनियो । एकात्मक शासनका विरोधमा जनता उठे । पञ्चायत गयो र बहुदल आयो । प्रजातन्त्र आएपछि अब राजनीतिक अस्थिरता हट्छ र विकासको मूल फुट्छ भन्ने सोच जनताका मनमा थियो । प्राप्त भएको प्रजातन्त्रले पनि नेपाली जनताको विकास, स्वतन्त्रता र उदात्तताको सम्पूर्ण भावलाई समेट्न सकेन । अनि भयो लोकतन्त्रको लडाइँ । त्यो जेहाद पनि नेपाली जनताकै अथक बलबुतामा २०६२÷०६३ मा सफल भयो । २४० वर्ष अघिको राजतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक भनियो र तिनलाई समेत सत्ताच्युत गरियो । उस बेला राजा शासन सत्ताको शिखरमा थिए । कालान्तरमा उनी समेत जरो किलोसँग फालिए । त्यसपछि आरम्भ भयो सङ्घीय गणतन्त्रको उदय ।
नेपाली जनताको ७० वर्ष अघि देखिको संविधानको चाहना । त्यो पनि संविधान सभाबाटै बनाउने थियो । पूरा गरियो । संविधान जारी भएपछि आवधिक चुनावका लहरमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका चुनावहरू भटाभट निर्बिघ्नाका साथ सम्पन्न भए । नेपाली काँग्रेस र नेकपाका बिच रस्साकस्सी भयो । नेपालले चुनावी पद्धतिमा लगभग विश्वको मन जितेको अवस्था छ । छिटपुट र झिना घटनाहरूका बाबजुद सबै चुनावहरू सम्पन्न भए । लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुनु र कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायमा हालिमुहाली गर्नुले पनि जनता वाक्क दिक्क भएका थिए । फलतः उत्साहजनक रूपले मतदानमा सरिक भए ।
स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा देशमा काँग्रेस र तत्कालीन एनेकपा माओवादीको मिलीजुली सरकार थियो । एमाले एक्लैले दुई ठुला पार्टीको चुनावी सामना ग¥यो । स्थानीय निकायमा दुई ठुला पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राखे भने माओवादीले बलैले आफ्नो साख जोगायो । प्रदेश र सङ्घीय चुनावताका देशको ‘राजनीतिक सिनारियो’ एकाएक बदलियो । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर चुनावमा होमिए । काँग्रेसलाई आफ्नो पहिलेको साइजमा बढ्न गाह्रो भयो । अन्य झिना मसिना दलहरू थ्रेसहोल्डका मारमा परे । काँग्रेस चुनावपछि सानो साइजमा रहेको प्रतिपक्ष भयो ।
अहिले मुलुकका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको चर्को बहुमतका प्रादेशिक सरकारहरू क्रियाशील छन् । केन्द्रमा त झन् दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ‘शेरगुल’ खिलाइरहेको छ । स्थानीय सरकारमा देशैभरि नेकपाकै पकड दह्रो छ । काँग्रेस यतिखेर स्थानीयमा धेरथोर रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रयासरत छ भने प्रदेश र केन्द्रमा झिनो उपस्थितिमाझ जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैछ ।
पाकिस्तानको निर्वाचनले नेपालजस्ता देशहरूलाई पाठ पढाउला÷नपढाउला तर विश्वलाई भने गतिलो पाठ पढाएको छ । पूर्व क्रिकेटर इमरान खानले पुरानो सत्ताका सबै खाले शक्तिलाई बढारेर जनताको मत जित्दै आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरी छाडे । हालै उनको प्रधानमन्त्री पदमा शपथग्रहण कार्य समेत सम्पन्न भयो । जनताको मन जित्न भनेरै सुखसयलपूर्ण सरकारी प्रधानमन्त्री निवास उनले छाडेका छन् । उनी बानागालास्थित आफ्नै घरमा बस्न चाहेका थिए तर सुरक्षाका कारण बसेनन् । अहिले उनी ३ वटा बेड रुम भएको सामान्य घरमा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५२४ जना कामदारहरू रहन्थे । उनले २ जना मात्र कामदार र सामान्य सैन्य सुरक्षाका लागि केही सैनिकहरू लगेका छन् । त्यसै गरी उनी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि तैनाथ ३३ वटा बुलेटप्रुफ कारहरूमध्ये सुरक्षाका कारण उनले २ वटा मात्रै लगेका छन् । खर्च कटौतीको सुरुआत उनले आफ्नो आवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सवारी साधनबाट गरेका छन् । बाँकी रहेका ३१ वटा बुलेट प्रुफ कार लिलामी गरिदिने र सो रकम सार्वजनिक कोषमा दाखिला गर्ने ऐलान जनताका माझ गरेका छन् ।
नेपाली जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराको सिको र प्रशंसा गर्छन् या गर्दैनन् ती कुरा आगामी दिनमा देखिने छन् तर प्रदेश नं. १ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्का लागि १६ करोडका गाडीहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको र मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडी किनिने समाचार प्रकाशमा आएको थियो ।
अहिले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्दै करका दरमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेका छन् । जसको कम्पन अहिले जनतामा नराम्रो गरी परिरहेको छ । डोल्पाका स्थानीय तहले भैँसी बेच्दा एक हजार र खसी बेच्दा १ सय पचास रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताले चर्को विरोध गरेका छन् । हुँदाहुँदै हाँसो उठ्दो काम के भयो भने नवजात शिशुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा १२ सय रुपैयाँ लिने तर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा आमालाई सुत्केरी गराउँदा १ हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । यो शैलीले प्रत्येक नवजातलाई नजन्मिँदै २ सयको ऋणी बनायो । जनताले करलाई बोझका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।
जनताबाट करै नउठाउने भन्ने होइन तर जनतालाई सेवा डेलिभरीमा पनि राज्यले जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्‍यो । एउटा समाचारपत्रले ललितपुरको कुनै नगरपालिकामा जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने भत्ता २०७४ फागुनसम्मको मात्र दिइएको तर निकासा भने २०७५ असारसम्म कै गराएको खबर छापिएको थियो । खबरको सत्यपनका लागि फिल्डमा बुझ्दा खबर सत्य भएको पाइयो । भनेपछि गोलमाल कतै पक्कै भएको छ नत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिसाब मिलान कसरी सम्भव भयो ?
‘घर कर तिर्न नसकेर घरै बोकेर सरकारलाई बुझाउन लैजाँदै गरेको कार्टुन’ केही दिनअघि ‘नागरिक’ दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको थियो । त्यसै गरी कुखुरा, बाख्रा, अण्डा, गाई, भैँसी, माछाजस्ता कृषि कार्यमा पनि कर लगाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भयो । जनतालाई कर नै नलगाउनु भन्ने होइन तर जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग भएन भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूबाट पनि बेला बेलामा विरोध भइरहेका छन् । उद्योगपति विनोद चौधरीले संसद्मा बोल्दै ‘करको सदुपयोग नभएको’ चिन्ता जाहेर गरेबाट सोही कुराको पुष्टि हुन्छ ।
दुई तिहाइको सङ्घीय सरकार असारे विकासलाई अन्त्य गर्न सक्ने अतुल क्षमताको हुँदाहुँदै पनि यस पटक त्यो विकृति रोकिएको देखिएन । राजधानीमा रहेका विविध सांस्कृतिक धरोहरहरू जो प्रायः सबै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् तिनीहरूको पुनर्निर्माण समेतमा राजनीतिक खिचातानी भएको पाइयो । रानीपोखरी र धरहराले राजनीतिक खिचातानीको ‘देउसी’ नै भोगेका छन् । सडकको हाल बेहाल रहेको छ । जताततै आहाल छ । ट्राफिक जाम अविराम छ । फोहोर, धूलो र हिलोमा राजनीति पन्पिएको पाइयो । हुँदाहुँदै सरकारले सुशासन स्थापनाका लागि सरकार गठन हुँदाताका चालेका पाइलाहरू पनि धर्मराएका देखिए । सुन काण्डले निचाल गति मात्र लिएन । विश्राम नै पायो । एन्एसीले किनेका दुईवटा वाइड बढीमा भएको ‘आर्थिक चलखेल’ एभेन्यूज टेलिभिजनका पर्दामा मात्र सीमित देखियो ।
‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ नहोस् सरकार नेपाली जनताको सपना, जपना र रटना –समृद्धि र विकास । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन् –‘समृद्धिका विविध आयाम हुन्छन् । आर्थिक विकास त्यसैमध्ये एक हो । आर्थिक विकासको मापन प्रति व्यक्ति आयमा गरिन्छ । उत्पादकत्व बढाएर आर्जन गरिने दिगो वृद्धिको बलमा सबैलाई माथि उठाउने प्रक्रिया नै समावेशी आर्थिक अवधारणा हो ।’ उनी अघि भन्छन् –‘नेपालमा अहिले नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ८ सयदेखि ९ सय डलर छ । हाम्रो छिमेकी देश श्रीलङ्काको भने ३५ सयदेखि ४ हजार डलर प्रति व्यक्ति आय रहेको छ । हामीले चामत्कारिक ढङ्गले २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यौँ भने पनि सन् २०३० सम्म हामी पुग्ने श्रीलङ्का बराबर नै हो । त्यति पुग्नु पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हो ।’
वाग्ले अझ अघि भन्छन् –‘इमान र विश्वासको पनि डेट स्क्सपायर हुन्छ । नेपाल असफल होइन, लुलो राज्य हो । लुलो राज्यको जिउ सब ठीकठाक हुन्छ तर हातगोडाहरू लुला हुन्छन् । काम गर्ने भनेको त मस्तिष्कका आधारमा हातगोडाले नै हो ।’ उनको रमाइलो तर्क छ –‘ठुला आयोजना जिम्मा लिएका अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरूमा ‘इकोनोमिक वार रुम’ बनाएर कुन ऐन कहाँ अड्किएको छ, कुन आयोजनामा कस्तो प्रगति छ, पलपलको खबर राख्नुपर्छ । प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विज्ञहरू बसेर विमर्श गरिनु पर्छ । नयाँ आइडियामा मन्थन हुनुपर्छ । विगतमा सरकारले चाहेर पनि यस्तो गर्ने अवस्था थिएन । ती दीर्घकालीन थिएनन् । ६ महिनामै फेरिन सक्ने सरकारप्रति त्यसै पनि विश्वास कम हुन्छ । ओली सरकारलाई भने त्यो सुविधा छ ।’
आफ्नो आर्थिक विश्लेषणमा लेखक सन्तोष आचार्य लेख्छन् –‘के नेपालको सङ्घीयता आर्थिक रूपले धान्नै नसकिने अवस्थामा हो ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको टिम र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक विज्ञहरूको टिमले गरेको क्रियाकलापले सङ्केत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का नहोला । तर, नयाँ व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा नै मजबुत बनाउन एक्लो व्यक्तिको क्षमता र विज्ञता पर्याप्त हुँदैन । चीनको आधुनिकीकरण सुरु गर्दा तेङ स्याओपिङले विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन प्रmाइडमानलाई सल्लाहकार लिएका थिए ।
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैँमा विख्यात अर्थशास्त्री हुन् । उनले आफ्नो सल्लाहकारमा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नियुक्त गरे । कौशिक वासु, रघुराम राजन, अनि अरविन्द सुब्रह्मन्युम केही उदाहरण हुन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै छैनन् । आर्थिक सल्लाहकार समूहको कुरा त धेरै परको भयो, अर्थमन्त्री आफैँमा अर्थ विज्ञ हुनुभयो, वहाँलाई आर्थिक विषयको सल्लाह आवश्यक नै भएन । यस मानेमा पुरानै संरचनाबाट सङ्घीयता सफल पार्छु भन्ने मानसिकता देखियो, जसले देशलाई आर्थिक दुर्घटनामा लैजाने सम्भावना प्रबल छ ।’
उनी अझै अघि लेख्छन् –‘हाल देखिएका करका विवादहरू त छिटफुट घटना मात्रै हुन् । जब प्रदेश अनि स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्छन्, त्यस बेला करका आजका समस्याहरू सानातिना लाग्नेछन् । प्रदेश वा स्थानीय तहको करको भारले यस्ता छिटफुट घटना होइन, ठुलो विस्फोट हुन सक्छ । यसर्थ, समयमै केन्द्र सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । होइन भने यो शिशु सङ्घीयता कुपोषणको सिकार हुने सम्भावना प्रबल छ ।’
चुनाव जिती सकेपछिका सही शासक अर्को चुनावको चिन्तामा लागिहाल्छ । उसलाई जनतालाई कसरी बढी से बढी सुख र सुविधाहरू दिन सक्छु भन्ने मात्र ध्याउन्न हुन्छ । अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा त्यो देखिन्नँ । मात्र कर बढाएर समृद्धि र विकास हासिल हुन्छ भन्ने एक सूत्रीय विचार सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको छ । जुन पछि गएर सरकार आफैँलाई गल पासो साबित नहोला भन्न सकिन्नँ ।
लेख रचना :जीवनले के सिकायो ?
आफू भित्र भएको ईश्वर लाई जीवन्त पारौँ
नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन रामप्रसाद खनालले गरेका १३ सँकल्पहरु
कोरोनाको कहरः नयाँ वर्षमा इतिहासमै पहिलोपटक सुनसान पोखरा
कोरोना संक्रमणबाट हामी नेपाली किन सुरक्षित छौँ ?